Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, oo uu taleefon kula hadlay Jimcaha, u sheegay in ay ka taageeri doonaan dagaalka Coronavirus, xilli Mareykanka uu qarka u saaran yahay inuu noqdo xudunta faafitaanka caalamiga ah ee cudurkan.
Dalka Mareykanka ayaa iminka ah dalka laga xaqiijiyey kiisaska ugu badan Coronavirus ee caalamka, oo hadda kor u dhaafay 85,000, kuwaasi oo 1,259 ka mid ah ay geeriyoodeen.
Isbitaallada, sida kuwa magaalooyinka New York iyo New Orleans ayaa la xarbinaya inay la taacaalaan bukaanada tirada badan ee loo keenayo.
Yabooha caawimaad ee Xi ayaa yimid ayada oo Beijing iyo Washington ay dhowaanahan is dhaafsanayeen hadallo kulul oo ay ka mid yihiin kuwa la xiriira Coronavirus.
Trump iyo qaar ka mid ah saraakiisha Mareykanka ayaa ku eedeeyey Shiinaha inay qarinayaan xogta rasmiga ah ee kiisaska Coronavirus ee dalkaas, waxaana Trump uu cudurka ugu yeeray “Fayruska Shiinaha”, taasi oo ka carreysiiyey Beijing.
Xi ayaa intii lagu guda jiray wada-hadalka Teleefon u sheegay Trump in Shiinaha aysan waxba qarineyn, sida lagu sheegay qoraal ay baahisay wasaaradda arrimaha dibedda Shiinaha.
Dhinaca kale, Trump ayaa qoraal uu soo dhigay twitter ku sheegay inuu “si faah-faahsan” faafitaanka Coronavirus ugala hadlay Xi.
“China wax badan ayey soo martay, waxayna wax badan oo xooggan ka fahantay Coronavirus, si dhow ayaan u wada shaqeyneynaa,” ayuu yiri Trump.